Wadamada ugu sigaar cabidda badan aduunka iyo kuwa ugu yar | Allbanaadir
Wadamada ugu sigaar cabidda badan aduunka iyo kuwa ugu yar
Waxaa hoos u dhac weyn ku yimid tirada dadka aadka u caba sigaarka maalintii, iyadoo hal milyan ay hoos uga dhacday tirada dadka isticmaala sigaarka marka la is barbar dhigo sanadihii 2016-kii iyo 2017-kii.
Hase yeeshe ,iyadoo muddo tobannan sano ah ay jirtay dadaallo lagu xadidayey cabidda sigaarka ayey tirada dadka caba sigaarka ay kor u kacday, sida daraasad la sameeyey sanadkii la soo dhaafay lagu sheegay.
Iyadoo la xusaya maalinta ka hortagga sigaar cabbidda , waa kuwan liiska wadamada ugu sigaar cabbidda badan iyo kuwa ugu sigaar cabidda yar.
Jasiiradda Kiribati ayaa ah dalka ugu sigaar cabidda badan aduunka, saddex jibaar ragga dalkaas ayaa sigaarka caba,iyo haween ka badan saddex jibaar dumarka ku nool Jasiiraddaas.
Dadka ku nool jasiiraddan ayaa gaaraya 103,000 oo qof , sigaarka ayaan laga canshuurin jasiiraddan taasi oo u fududaysay dadka inay si sahlan ku heli karaan.
Waddankan oo ku yaalla Bariga Yurub ayey ku noolyihiin tirada dadka ugu badan ee Yurub cabba sigaarka taasi oo dhan 46%.
Dadka ku nool dalkan ayaa gaaraya 633,000 oo qof ,4124 xabo oo sigaar ah ayuu qofkiiba cabaa sanadkii.
Iyadoo laga mamnuucay inay dadka sigaarka ku caban goobaha ay dadka isugu yimaadaan ayey weli si xor ah ugu cabbaan goobaha shaqada,maqaayadaha iyo xarumaha gaadiidka laga raaca.
Gariiga ayaa ah dalka saddexaad ee ugu sigaar cabidda badan adduunka, kala bar dadka ku nool Gariiga ayaa caba sigaar ,35% ka mid ah dumarka dalkaas ayaa caba sigaarka.
Iyadoo la meel mariyey sharci lagu joojinaya sigaar cabidda 2008-dii ayaa waxaa weli jira dad badan oo sigaarka cabba.
Waxaa si sharci darro ah badanaa waddanka lagu soo geliyaa sigaarka .
Bariga Timor ayaa ka mid ah meelaha ugu sigaar cabka badan dunida, 80% raga ku nool dalkaas ayaa caba sigaarka taasi oo noqonaysa tirada ragga ugu sigaar cabka badan adduunka.
6% dumarka dalkaas ayaa sidoo kale cabba sigaarka.
Waxa goobaha la isugu yimaado iyo meelo badan lagu shaaciyey digniino looga hadlayo dhibaatada sigaarka ,balse kala bar dadka waaweyn ayaan aqrin karin qoraaladaasi.
Ruuska ayaa ah waddanka shanaad ee ugu sigaar cabidda badan adduunka , ku dhawaad 60% raga ku nool dalkaas ee ka weyn 15 sano ayaa caba sigaarka, 23% haweenka ku nool Ruushka ayaa sidoo kale caba sigaarka.
Waxaa horay loo mamnuucay in sigaarka lagu cabo goobaha shaqada iyo xarumaha ay dadka ku kulmaan , balse waxa si weyn dalkaas looga xayeysiiyaa ka ganacsiga sigaarka taasi oo qeyb ka geysatay in dadka ay si aad ah u cabbaan.
Suuqyada lagu iibiyo sigaarka ee ka jira gudaha Ruushka ayaa lagu qiyaasaa qiimo dhan 22 milyan oo doolar.
Wadamada ugu sigaar cabidda yar.
Wadamada ugu sigaar cabidda yar ayaa waxaa ka mid ah Ghana, Ethiopia, Nigeria, Eritrea iyo Panama.
Sida ay hay’adda caafimaadka adduunka sheegtay 14% ee dadka ku nool Afrika ayaa caba sigaarka taasi oo ka yar tirada celceliska guud ee adduunka oo ah 22%.
Tirada ragga sigaarka caba ee ku nool Afrika ayaa lagu qiyaasaa 70% ilaa 85% .
Haweenka sigaarka cabba ayaa badanaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa aan akhlaaq lahayn.
Ghana, Ethiopia iyo Nigeria ayaa sidoo ku biiray hay’adda WHO oo wadday dadaal ay ku joojinayso cabidda sigaarka si looga qaado tallaabooyiin adag dadka isticmaala sigaarka.
WHO ayaa ku qiyaastay 10 milyan dadka Jaadka cuna adduunka oo dhan.
Sigaar cabidda ayaa hoos ugu dhacday ka dib markii la hor mariyey nidaam cusub oo dhanka canshuurta ah , iyadoo warshadaha soo saara sigaarka ay ku sii badanayaan wadama hormaraya ayna doonayaan inay soo jiitaan dhalinyarada.
Waddanka ugu sigaar cabidda badan adduunka.
Shiinaha ayaa ah waddanka ugu soo saarka badan sigaarka uguna cabidda badan , sida ay hay’adda caafimaadka adduunka sheegtay.
Waxaa lagu qiyaasaa dadka caba sigaarka ee ku nool dalka Shiinaha inay ka badanyihiin 300 milyan oo qof .
Hase yeeshe daraasad ay sameeyeen koox caalami ah ee lagu magacaabo Euromonitor 2016-dii , ayaa sheegtay in tirada dadka sigaarka caba ee dalkaas ay hoos u dhacday markii ugu horreysay muddo laga jooga 20 sano.
Waddanka kaliye ee ay tirada dumarka sigaarka ay ka badanyihiin raga ayaa ah Denmark, 19.3% dumarka sigaarka caba , halka tirada ragga sigaarka cabba ay dhan tahay 18.9.
Sigaarka ayaa dila dad ka badan 7 milyan sanad kasta , marka lagu daro dadka lagu cabo agaarkooda oo ay sameyn gaarto.Sida ay hay’adda caafimaadka adduunka sheegtay ,ku dhawaad 1.1 bilyan ee dadka sigaarka caba ayaa ah dad sabool ah.Sigaarka laga soo saaro Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa lagu qiyaasaa inuu qiimahiisa gaaraya 770 bilyan ee doolar.